Iyiphi indlela efanelekileyo yokubhala ibhulogi yamazwana kwi-backlinks?
Uninzi ngokuqhelekileyo, xa kuziwa kwinkqubo ye-Search Engine Optimization (SEO) kwinqanaba, abantu abaninzi banokudideka okanye mhlawumbi badidekile ngokudala iprogram ye-backlink yezwi okanye iwebhusayithi. Kodwa yintoni ingxaki? Into kukuba ukwakha i-backlinks nokuyifumana-inene izinto ezimbini ezihlukeneyo. Ukwakha i-backlinks kuthetha ukudala okanye ukuzithengela kuphela iinjongo ze-SEO. Ekugqibeleni - uyazifuna ukuba uzifumene phakathi kweziphumo zophando eziphezulu kwiGoogle. Ngakolunye uhlangothi, nangona kunjalo, ukufumana i-backlink kuthetha ukuba ufanelekile ngokwenene. Ukutshala ixesha kunye nomgudu ngokubhala ibhulogi ezwakalayo ye-backlink yinto emele ukufumana abo bafanelwe. Yingakho kufanele ukwazi indlela yokwenza igalelo elifanelekileyo lebhulogi kwi-backlink esebenza ngokwenene ekuphuculeni umzamo wakho we-SEO kwisikali. Ngoko, yintoni eyenza izimvo zeblogi "ezilungele" eziya ku "fumana" kuwe kwi-backlink ezininzi ze-HQ ngekhasi eliphezulu le-PageRank? Masihlole!
Kodwa ngaphambi kokuba siqale, masijongane nayo - ukufumana i-backlinks kuthetha ukuba kufuneka ube namandla. Ukusuka kwimbono ye-SEO, ukuba wenza umsebenzisi onwabileyo, uya kukholisa injini yokukhangela ye-Google. Ndiyathetha ukuba akukho mfuneko yokuchitha ixesha elininzi ukukhangela nayiphi na into okanye ukukhohlisa okanye ukuphatha nge-algorithm enkulu. Ndinqwenela ukuba ndibuye ndibuyele ixesha lam, kodwa kungcono ukuba uthathe ngokungenakutyala - ukuba ufuna ukwakha ishishini langempela evelisa ingeniso yangempela, kufuneka ugxininise umzamo wakho wokukholisa umsebenzisi. Enyanisweni, ukwenza konke kuvuyiswe ngesiseko esifanelekileyo kunokuguqula ngamnye wabo kubancedisi abancinci kubasebenzisi bokuzonwabisa-abonwabileyo baya kukufumana i-backlinks ezithe xaxa, wabelane ngomxholo wakho kwiwebhu, kwaye banokubuyela kwakhona baze babe bakho abathengi emva koko konke.
Ukubuyela kwinqanaba - yintoni indlela efanelekileyo yokufumana izimvo zeblogi ezintle kwi-backlinks - makhe ndikubonise inkqubo kwinqanaba. Nantsi oku kufuneka ukwenze:
Yiba ngumsetyenzana womsebenzisi
Yenza umkhankaso wakho we-SEO jikelele ujikeleze umsebenzisi kuphela - owokuqala nokuphambili. Konke okufuneka ukhumbule kukuba iGoogle iyaqonda i-backlink nganye "njengevoti. "Ngaloo ndlela, konke okufunekayo apha kukufumana ngaphezulu" iivoti "zamanqanaba ukuze ibhulogi nganye ekhethekileyo kwi-backlink ibe luncedo.
Gxininisa kuMgangatho, kungekhona ubungakanani
Akukho mfuneko yokuthetha ukuba yonke into kufuneka yenziwe ngokusemthethweni, ngaphandle kokukhawuleza nje ukusalela izithuba ezininzi njengoko kunokwenzeka. Ngaphandle koko, ukwenza konke kuya kutshintshwa nguGoogle njengogaxekile okanye uhlobo oluthile lokuxhaphaza. Ngaloo ndlela, khumbula - ukunyanzeliswa kwamagunya akuvumelekanga apha, njengokuba kukho ukuvakalisa ibhulogi enye ye-backlinks kwenye indawo kwi-intanethi inokuba yingozi kwimeko yakho.
Yenza isiqulatho sakho sihlale siphuma
Njengoko ndithe ndathetha, ukudala umthamo omkhulu wenkunkuma. Ndiyathetha ukuba indlela yodwa yokwenza iwebhusayithi yakho okanye ibhulogi ikhule kukukhokela kwaye uphume ngaphandle kokhuphiswano. Ukuqwalasela i-blog yakho ye "blog" ye-blog ye-backlinks, ndincoma ukuba uqinisekise ukuba awunayo nayiphi na impendulo engafaniyo okanye engapheliyo.Ngaloo ndlela, unganqikazi ukusingatha uphando olupheleleyo lweedatha rhoqo xa ubeka izimvo ukuze kungabi nakubuntu okanye ukungabi nako. Kwakhona, kufuneka ube nobuchule kwaye uhlale uzimisele ukwenza izinto ezingaphantsi kwabanye (kubandakanye ukukhuphisana kwakho kunye nabadlali be-niche). Emva kokuba konke, ungakhohlwa ukujonga ezinye iindlela zokufikelela kumxholo wakho ngaphandle kwebhulogi ukuphawula. Ndiyathetha ukuba kukho ezinye iindlela ezininzi zokufumana izixhumanisi, ezifana nokubhala amanqaku eendwendwe kunye nezithuba ngezihlandlo, okanye nakwixesha lakho lokuma Source .